तीन वर्षदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा, अब काठमाडौं उपत्यकामा स–साना घडेरी किन्न सकिने
नेपाल तीन वर्षदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा, अब काठमाडौं उपत्यकामा स–साना घडेरी किन्न सकिने
Nepal Online Patrika| Kathmandu: सरकारले तीन वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेको हो ।
२६ साउन ०७४ मा तत्कालिन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहिलले कृषियोग्य भूमिको खण्डिकरण गर्नबाट रोक्न कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
तर, भदौ १८ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले पुरानो निर्देशनलाई खारेज गरी सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री पद्या अर्यालले यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने गरी नीतिगत निर्णय गरेकी हुन् ।
अब भूउपयोग नीतिभित्र रहेर स्थानीय तहले बनाएको मापदण्डअनुसार मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने छ । सरकारको यो निर्णयसँगै अब काठमाडौं उपत्यकामा स–साना घडेरी किनबेच गर्न बाटो खुल्ला भएको छ ।
५० वर्ष भयो एटीएमको युग:
हाल कोरोना महामारीको समयमा बैंकमा जाँदा संक्रमणको जोखिम हुन्छ । तर दैनिक खर्च धान्नका लागि पैसा निकाल्नु आवश्यक छ । यसलाई एटीएम अर्थात् अटोमेटेड टेरल मेसिनले अत्यन्तै सहयोग पु-याएको छ । तर तपाईलाई थाहाँ छ यसको आविष्कार कहाँ भएको थियो ? यसलाई बैंकिङ क्षेत्रमा किन क्रान्तिकारी परिवर्तन मानिएको छ ? सबैभन्दा पहिले एटीएमको प्रयोग लन्डनमा भएको थियो ।
तर आधुनिक एटीएमको प्रयोग सबैभन्दा पहिले अमेरिकामा १९६९ मा भएको थियो । १९६७ मा लन्डनमा बार्कलेज बैंकको एक शाखामा एटीएम राखिएको थियो । यसको सुरुवातदेखि हालसम्म विभिन्न परिवर्तन आइसकेका छन् ।
सुरुवातको कारोबार प्रक्रिया:
लन्डनको बार्कलेज बैंकको एटीएमलाई डि ला रु अटोमेटिक क्यास सिस्टम भनिन्थ्यो । यो एटीएमलाई जोन सेफर्ड ब्यारेनको टोलीले बनाएको थियो । यसमा कारोबारका लागि कागजको चेकलाई भित्र हाल्नु पर्दथ्यो । यो कागज बैंकको क्यासियरकोतर्फबाट दिइन्थ्यो ।
कार्डलाई प्रयोगमा ल्याइयो
लन्डनमा प्रयोग गरिएको एटीएमपछि एक मेशिन स्पेटेक तथा मिडल्यान्ड बैंकले बनाएको थियो । यो मेसिनमा सिंगल यूज टोकन तथा भौचरको सट्टा एक कार्डको प्रयोग गरिएको थियो । यो कार्डको पछाडि एक म्याग्नेटिक स्ट्रिपको प्रयोग गरिएको थियो । यो कार्डमा कार्बन–१४ सँगै म्याग्नेटिजमको प्रयोग गरिएको थियो । जसले धोखाघडीलाई रोक्न सहयोग पुगेको थियो ।
खास कोड हालेर एटीएमबाट निकालिन्थ्यो पैसा:
१९६५ देखिनै कार्डमा पीन राख्ने विषयमा विचार भइरहेको थियो । यसपछि १९७० को दसकमा यो कार्ड व्यापक प्रयोगमा आयो । तर १९६९ को डिसेम्बरमा आधुनिक कार्डको सबैभन्दा पहिलो प्रयोग अमेरिकामा भयो । न्यूयोर्कको मेसिनलाई पहिलो आधुनिक एटीएम मानिएको थियो ।
माइक्रोप्रोसेसर आधारित मेसिन
७० को दसकमा माइक्रोप्रोसेसर आधारित मेसिन बन्न सुरु भएको थियो ।ं यसपछि एक हार्डवेयर सेक्यूरिटी मोड्यूल बनाइएको थियो । यो मोड्यूललाई अटाला बक्सको नामबाट चिनिन्थ्यो ।
नेपालमा एटीएम सबैभन्दा पहिले हिमालय बैंकले १९९५ मा सुरु गरेको हो । तर यसको प्रयोगको विस्तार व्यापक हुन सकेको थिएन । हाल आएर भने नेपालमा यसको प्रयोग व्यापक हुन थालेको छ ।